Mogadishu Journal » 2020 » January » 6
Nigeria: Kidnapped schoolgirls released, says governor
Turkiga oo bilaabay in uu ciidamadiisa u daabulo Liibya
Mjournal :-Madaxweynaha dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dowladiisa ay bilawday in ay daabusho ciidamo uu baarlamaanka dalkaas aqbalay in la geeyo dalka Libya. Erdogan ayaa sheegay in ujeedada Turkiga uu ka leeyahay arrintan ay tahay xaqiijinta xasiloonida...
Activist Boniface Mwangi has asked President Uhuru Kenyatta-led government to withdraw the Kenya Defense Forces (KDF) from Somalia to protect the nation from incessant attacks by Al Shabaab terror militia. In a tweet on Monday, Mwangi said that the recent attack in Lamu has...
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, on Monday announced that tourist visas in the UAE will now be issued for five years. Today, we change the system of issuing tourist visas in the country, to make...
Xildhibaanada aqalka sare oo Ansixiyay Sharciga Batroolka
Mjournal :-Kulankii 25aad ee Kalfadhiga 6aad ee Golaha Aqalka Sare BFS .Kulanka waxaa shir guddominaayo Guddomiyaha Golaha Aqalka Sare ee BFS Senatar Cabdi Xaashi Cabdullahi ayada oo ay ku-wehliyaan Guddomiye Ku-xigeenka 1aad ee Golaha Aqalka Sare Senatar Abshir Maxamed Axmad iyo...
Puntland oo sheegtay inay howlgal ku dishey Xubno ka tirsan Daacish
Mjournal :-Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Maamulka Puntland ee loo yaqaano PSF ayaa waxaa howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen toga Miraale we GobolkaBari,halkaas oo la sheegay inay ku dileen Xubno ka tirsan Kooxda Daacish. Saraakiisha howlgalka hoggaamineysa ayaa waxaa ay...
Mjournal :-Maxkamadda Sare ee ciidamada Puntland ayaa maanta waxay xukuno dil ah ku ridday saddex askeri oo horey uga tirsanaan jiran ciidamada Puntland, kuwaasoo horay u geystay dilal. Waxaa kaloo ay maxkamadu dhegeysatay qaar ka mid ah rag horay Maxkamada Darajada Koowaad ee...
Wasiir Beyle oo Addis Ababa uga qeybgalay shir looga hadlayay dayn cafinta Somaliya
Mjournal :-Wasiirka maaliyadda xukuumadda fedraalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta magaalada Adis-ababa ee caasimadda dalka Itoobiya waxa uga qeybgalay shirka dib u eegista 2-aad ee SMP4 oo ah hanaanka 4aad ee deyn cafinta Soomaaliya. Inta uu socdo Shirkaan u...
Boqolaal kun oo qof oo Baroor diiq u sameeyay Qaasim Soleimani
Mjournal :-Hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa maanta hoggaamiyey duco loo qabtay Qassem Soleimani, ayada oo boqolaal kun oo qof ay isugu soo baxeen magaalada Tehran, si ay ugu baroordiiqaan Jeneraalkii sare ee Iran. Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxaa wehliyey...
Dowladda Soomaaliya oo cambaaraysay weerakii Al-shabaab ee Lamu
Mjournal :-War ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa canbaarayn dusha looga tuuray weerarkii kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ee Manda Bay ee gobolka Lamu ee dalka Kenya. “Weerarka fashilmay ee ururka argagixiso ee sii burburaya ee...
Ciidamada Dowladda oo howlgal qorsheysan ka fuliyey Sh Hoose
Mjournal :-Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saacadihii la soo dhaafay waxaa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada Marka ee Xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalka ayaa Ciidamada waxaa ay sigaar ah uga sameeyeen deegaanka Ceel Saliini iyo...
Qarax xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo
Mjournal :-Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan qarax xalay Waqooyiga Magaalada gaalkacyoee Xarunta Gobolka Mudug lagula eegtay Sarkaal ka tirsan Ciidamada isku-dhafka ee xasilinta Magaalada Gaalkacyo. Sarkaalka ayaa la sheegay in miino loogu xirey...